Abavelisi beMonocrystalline | I-China Monocrystalline Ifektri
IPhaneli yeSola yeBifacial
IPHANTSI YAM SOLAR Bifacial Solar
Iphaneli yeSolar yeSeli
ILANGA LAM M3 Mono Solar PV P ...
ISOLAR YAM M2 Mono Solar PV P ...
ISOLAR YAM M6 Isiqingatha seSeli yeSola ...
IPaneli YAM SOLAR M2 Mono Solar PV 305w 310watt 315wp 320 Watt 325 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula (ukuya kuthi ga kwi-19.98%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza kokuKhanya okuPhantsi Iglasi ephezulu kunye nesicatshulwa somgangatho weseli ...
IPaneli YAM SOLAR M2 Mono Solar PV 365w 370watt 375wp 380 Watt 385 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula (ukuya kuthi ga kwi-19.84%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukuchasana kwe-PID yokuGqwesa kokusebenza kwe-Anti-PID
Iphaneli yam SOLAR M3 Mono Solar PV Iphaneli 185w 190watt 195wp 200 Watt 205 w iPerc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.3%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
Iphaneli yam SOLAR M3 Mono Solar PV 245w 250watt 255wp 260 Watt 265 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-19.8%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya Iglasi ephezulu kunye nomphezulu weseli ...
IPhaneli YAM SOLAR M3 Mono Solar PV 315w 320watt 325wp 330 Watt 335 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.08%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza kokuKhanya okuPhantsi Iglasi ephezulu kunye nesicatshulwa somgangatho weseli ...
Iphaneli yam ye-SOLAR M3 Mono Solar PV 380w 385watt 390wp 395 Watt 400 w Perc Solar Pv Module
IIMPAWU EZIBALULEKILEYO 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokuphucula ukusebenza kweemodyuli, inikezela ngenkangeleko entle yobuhle, iyenza ukuba ilungele ukufakwa kophahla. Ukusebenza ngokukuko Ukusebenza kwemodyuli ephezulu yokuguqula ukusebenza (ukuya kuthi ga kwi-20.17%) isibonelelo sobuchwephesha obuThunyelweyo be-Emmiter Rear (PERC). Ukuchasana ne-PID ngokuGqwesileyo ngokusebenza kwe-Anti-PID kuqinisekisa ukuthotywa kwamandla okulinganiselweyo kwimveliso yobuninzi. Ukusebenza okuphantsi kokukhanya kweglasi ephezulu kunye nombhalo we-texturin ...
No18, iYanxing Road Yanqiao Huishan yoPhuhliso lwezoQoqosho wuxi, China